Acrylic dahaarka Maro adag Fabric-saareyaasha & Shirkado - Shiinaha Acrylic dahaarka Maro adag Fabric Factory
Dharka loo yaqaan 'Acrylic Fiberglass Maro' waxaa lagu xiraa dunta E-galaaska ah iyo dunta la marsaday, ka dibna lagu dahaaray xabagta acrylic. Waxay noqon kartaa labada dhinac iyo labada dhinacba daahan. Dharkani waa qalab ku habboon bustaha dabka, daah alxanka, daboolka ka hortagga dabka, sababtoo ah saxitaankiisa weyn, sida ololka oo dib u dhac ku yimaadda, iska caabbinta heerkulka sare, xoogga sare, deegaanka u fiican.
Maro adag Maro adag Waayo Dhismaha Doonta
Maro Fiberglass ah oo loogu talagalay Dhismaha Doomaha waxaa lagu tolay dunta E-muraayadda ah iyo dunta la marsaday, ka dibna lagu dahaaray xabagta acrylic. Waxay noqon kartaa labada dhinac iyo labada dhinacba daahan. Dharkani waa qalab ku habboon bustaha dabka, daah alxanka, daboolka ka hortagga dabka, sababtoo ah saxitaankiisa weyn, sida ololka oo dib u dhac ku yimaadda, iska caabbinta heerkulka sare, xoogga sare, deegaanka u fiican.
Maro Fibreglass 3m
Fibreglass Maro 3m ayaa lagu tolay dunta E-galaaska iyo dunta qoraalka, ka dibna lagu daboolay xabagta acrylic. Waxay noqon kartaa labada dhinac iyo labada dhinacba daahan. Dharkani waa qalab ku habboon bustaha dabka, daah alxanka, daboolka ka hortagga dabka, sababtoo ah saxitaankiisa weyn, sida ololka oo dib u dhac ku yimaadda, iska caabbinta heerkulka sare, xoogga sare, deegaanka u fiican.
Maqaarka Maaraynta Maaraynta Maqaalka
Mashiinka Maaraynta Maaraynta Maaraynta Korantada waxaa lagu xiraa dunta E-galaaska ah iyo dunta qaabaysan, ka dibna lagu daboolay xabagta looxa. Waxay noqon kartaa labada dhinac iyo labada dhinacba daahan. Dharkani waa qalab ku habboon bustaha dabka, daah alxanka, daboolka ka hortagga dabka, sababtoo ah saxitaankiisa weyn, sida ololka oo dib u dhac ku yimaadda, iska caabbinta heerkulka sare, xoogga sare, deegaanka u fiican.
Maro Maaskaro Diidmada Fiberglass
Mashiinka Maaddada Fiberglass-ka ee Difaaca Waxay noqon kartaa labada dhinac iyo labada dhinacba daahan. Dharkani waa qalab ku habboon bustaha dabka, daah alxanka, daboolka ka hortagga dabka, sababtoo ah saxitaankiisa weyn, sida ololka oo dib u dhac ku yimaadda, iska caabbinta heerkulka sare, xoogga sare, deegaanka u fiican.
Maro Maro ah
Maro Fiberglass waxaa lagu tolay dunta E-muraayadda iyo dunta la marsaday, ka dibna lagu dahaaray xabagta looxa. Waxay noqon kartaa labada dhinac iyo labada dhinacba daahan. Dharkani waa qalab ku habboon bustaha dabka, daah alxanka, daboolka ka hortagga dabka, sababtoo ah saxitaankiisa weyn, sida ololka oo dib u dhac ku yimaadda, iska caabbinta heerkulka sare, xoogga sare, deegaanka u fiican.
Maro Fiberglass ah oo jaban ayaa lagu tolay dunta E-galaaska ah iyo dunta la marsaday, ka dibna lagu dahaaray xabagta acrylic. Waxay noqon kartaa labada dhinac iyo labada dhinacba daahan. Dharkani waa qalab ku habboon bustaha dabka, daah alxanka, daboolka ka hortagga dabka, sababtoo ah saxitaankiisa weyn, sida ololka oo dib u dhac ku yimaadda, iska caabbinta heerkulka sare, xoogga sare, deegaanka u fiican.
6mm Sheet Maro adag oo Maro adag
6mm Shey Fiberglass Maro ah Xaashida waxaa lagu tolay dunta E-muraayadda iyo dunta qoraalka, ka dibna lagu dahaaray xabagta acrylic. Waxay noqon kartaa labada dhinac iyo labada dhinacba daahan. Dharkani waa qalab ku habboon bustaha dabka, daah alxanka, daboolka ka hortagga dabka, sababtoo ah saxitaankiisa weyn, sida ololka oo dib u dhac ku yimaadda, iska caabbinta heerkulka sare, xoogga sare, deegaanka u fiican.
3mm dhumucdiisuna Maro adag Maro waxaa lagu tolay dunta E-muraayadda iyo dunta textured, ka dibna lagu daboolay xabagta acrylic. Waxay noqon kartaa labada dhinac iyo labada dhinacba daahan. Dharkani waa qalab ku habboon bustaha dabka, daah alxanka, daboolka ka hortagga dabka, sababtoo ah saxitaankiisa weyn, sida ololka oo dib u dhac ku yimaadda, iska caabbinta heerkulka sare, xoogga sare, deegaanka u fiican.
Maro Maro ah, Maro adag Maro adag, Maro adag Dahaarka Acrylic, Pu Dahaarka Maro adag Fabric Maro, Aluminized Maro adag, Acrylic dahaarka Maro adag Fabric,